December 2018 | Language Century Language Century
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၉။
6:17 PM C-Grammar , C-Video , Chinese
အခြေခံအဆင့် မသိမဖြစ် သဒ္ဒါသင်ခန်းစာ ပို့ချချက်တွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။
Key -9[ V + O + V ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၉။
အခွခေံအဆငျ့ မသိမဖွဈ သဒ်ဒါသငျခနျးစာ ပို့ခခြကျြတှကေို ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့ ရှငျးပွထားပါတယျ။
ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - သဒ္ဒါ - တရုတ်သဒ္ဒါ - အခြေခံ သဒ္ဒါ - အဆင့်မြင့် သဒ္ဒါ - ဗီဒီယို သငျခနျးစာ ပို့ခခြကျြ - ဝေါဟာရ - စကားပွော - တရုတျစကား - စိုငျးဆိုငျခမျးဝျ - တရုတျဝေါဟာရ - တရုတျစကားပွော - သဒ်ဒါ - တရုတျသဒ်ဒါ - အခွခေံ သဒ်ဒါ - အဆငျ့မွငျ့ သဒ်ဒါ -Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - Dialogue - Vocabulary - Grammar - GRAMMAR - grammar
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၈။
6:13 PM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key - 8 [ V + O + V ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၈။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၇။
6:03 PM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key -7[ V + O + V ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၇။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၆။
5:57 PM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key -6[ S + 不 + V + V + O ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၆။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၅။
12:49 AM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key -5[ S + V + V + O ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၅။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၄။
12:44 AM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key -4[ S + V + O + 吗？]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၄။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၃။
12:17 AM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key -3[ S + 不 + V + O ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၃။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၂။
12:05 AM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key -2[ S + V + O ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၂။
တရုတ်သဒ္ဒါ အခြေခံသင်ခန်းစာ - ၁။
1:14 AM C-Grammar , C-Video , Chinese
Key - 1 [ S + V ]
တရုတျသဒ်ဒါ အခွခေံသငျခနျးစာ - ၁။
ငါတို့ ဘယ်မှာ ဆုံကြမလဲ။
2:08 AM C-Dialogue , Chinese
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြဖို့ ချိန်းဆိုကြတဲ့အခါ အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြပုံလေးတွေကို လေ့လာရမှာပါ။
☞ Wǒmen míngtiān yìqǐ qù kàn qiú ba.
☞ ငါတို့ မနက်ဖြန် အတူတူ ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်ကြမယ်။
☞ Hǎo a! Wǒmen zài nǎr jiànmiàn?
☞ ကောင်းတာပေါ့။ ငါတို့ ဘယ်မှာ ဆုံကြမလဲ။
☞ Míngtiān wǔ diǎn, zài xuéxiào pángbiān de chēzhàn, zěnmeyàng?
☞ မနက်ဖြန် ငါးနာရီ၊ ကျောင်းဘေးက ကားမှတ်တိုင်မှာ၊ ဘယ်လိုလဲ။
☞ Nà ge shíjiān chēzhàn rén hěn duō.
☞ အဲဒီအချိန်က ကားမှတ်တိုင်မှာ လူ အရမ်းများတယ်။
☞ Nà wǒmen jiù zài chēzhàn pángbiān de kāfēidiàn jiànmiàn ba.
☞ ဒါဆို ငါတို့ ကားမှတ်တိုင်ဘေးက ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲ ဆုံကြတာပေါ့။
☞ Hǎo de.
ငါတို့ ဘယျမှာ ဆုံကွမလဲ။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ကွဖို့ ခြိနျးဆိုကွတဲ့အခါ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုကွပုံလေးတှကေို လလေ့ာရမှာပါ။
☞ ငါတို့ မနကျဖွနျ အတူတူ ဘောလုံးပှဲ သှားကွညျ့ကွမယျ။
☞ ကောငျးတာပေါ့။ ငါတို့ ဘယျမှာ ဆုံကွမလဲ။
☞ မနကျဖွနျ ငါးနာရီ၊ ကြောငျးဘေးက ကားမှတျတိုငျမှာ၊ ဘယျလိုလဲ။
☞ အဲဒီအခြိနျက ကားမှတျတိုငျမှာ လူ အရမျးမြားတယျ။
☞ ဒါဆို ငါတို့ ကားမှတျတိုငျဘေးက ကျောဖီဆိုငျမှာပဲ ဆုံကွတာပေါ့။
သူဌေးက သင့်ကို ထမင်းလိုက်ကျွေးတဲ့အခါ။
6:46 AM C-Dialogue , Chinese
ကုမ္ပဏီသူဌေးက သင့်ကို ထမင်းလိုက်ကျွေးတဲ့အခါ ဘယ်လို ပြန်ပြောသင့်လဲဆိုတာကို ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ လေ့လာရမှာပါ။
☞ Xiǎo Zhāng, zhè cì de gōngzuò zuò de búcuò.
☞ Xiao Zhang၊ ဒီတစ်ခေါက် အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်ကွ။
☞ Xièxie Wáng zǒng.
☞ ကျေးဇူးပါ မန်နေဂျာ Wang။
☞ Búguò hái yǒu ge wèntí wǒ xiǎng gēn nǐ shuō yíxià.
☞ ဒါပေမယ့် ငါ့မှာ မင်းနဲ့ ပြောချင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိသေးတယ်။
☞ Nín shuō.
☞ Bù jí, yíhuìr wǒ qǐng nǐ chī fàn ba, wǒmen biān chī biān shuō.
☞ အေးဆေးပေါ့၊ တော်ကြာနေမှ ငါ မင်းကို ထမင်းလိုက်ကျွေးမယ်၊ ငါတို့ ထမင်းစားရင်း ပြောကြတာပေါ့။
☞ Búyòng búyòng, háishì wǒ qǐng nín ba.
☞ မလုပ်ပါနဲ့၊ ကျွန်တော် ကျွေးပါ့မယ်။
☞ Bié kèqi, nǐ jiù dāng shì gōngzuò cān ba, hā hā.
☞ အားမနာပါနဲ့၊ အလုပ်သဘော စားသောက်ပွဲလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပေါ့၊ ဟားဟား။
☞ Xièxie lǎobǎn!
☞ ကျေးဇူးပါ သူဌေး။
သူဌေးက သငျ့ကို ထမငျးလိုကျကြှေးတဲ့အခါ။
ကုမ်ပဏီသူဌေးက သငျ့ကို ထမငျးလိုကျကြှေးတဲ့အခါ ဘယျလို ပွနျပွောသငျ့လဲဆိုတာကို ဒီသငျခနျးစာထဲမှာ လလေ့ာရမှာပါ။
☞ Xiao Zhang၊ ဒီတဈခေါကျ အလုပျလုပျရတာ အဆငျပွတေယျကှ။
☞ ကြေးဇူးပါ မနျနဂြော Wang။
☞ ဒါပမေယျ့ ငါ့မှာ မငျးနဲ့ ပွောခငျြတဲ့ ကိစ်စတဈခု ရှိသေးတယျ။
☞ အေးဆေးပေါ့၊ တျောကွာနမှေ ငါ မငျးကို ထမငျးလိုကျကြှေးမယျ၊ ငါတို့ ထမငျးစားရငျး ပွောကွတာပေါ့။
☞ မလုပျပါနဲ့၊ ကြှနျတျော ကြှေးပါ့မယျ။
☞ အားမနာပါနဲ့၊ အလုပျသဘော စားသောကျပှဲလို့ပဲ သဘောထားလိုကျပေါ့၊ ဟားဟား။
☞ ကြေးဇူးပါ သူဌေး။
6:21 AM C-Dialogue , Chinese
တခါတလေမှာ ဖုန်းမှားဆက်မိတာတွေ ကြုံဖူးမှာပါ။ ဒီစကားပြောထဲမှာတော့ ဖုန်းမှားဆက်မိတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာတွေကို လေ့လာရမှာပါ။
☞ Wéi, Nín hǎo!
☞ ဟယ်လို၊ မင်္ဂလာပါ။
☞ Chén zǒng, nín hǎo nín hǎo!
☞ မန်နေဂျာ Chen ၊ မင်္ဂလာပါ။
☞ Nín dǎ cuò le, wǒ bú shì Chén zǒng.
☞ ခင်ဗျား ဖုန်းမှားနေတယ်၊ ကျွန်တော်က မန်နေဂျာ Chen မဟုတ်ပါဘူး။
☞ Nín bú shì Chángchéng gōngsī de Chén zǒng ma?
☞ ခင်ဗျားက ဂရိတ်ဝေါကုမ္ပဏီက မန်နေဂျာ Chen မဟုတ်ဘူးလား။
☞ Bú shì.
☞ A, nà bù hǎo yìsi, dǎ cuò le.
☞ ဟာ၊ ဒါဆို အားနာလိုက်တာဗျာ၊ ဖုန်းမှားသွားလို့ပါ။
☞ Méi shì.
☞ Zài jiàn.
တခါတလမှော ဖုနျးမှားဆကျမိတာတှေ ကွုံဖူးမှာပါ။ ဒီစကားပွောထဲမှာတော့ ဖုနျးမှားဆကျမိတဲ့အခါ ဘယျလိုပွောရမယျဆိုတာတှကေို လလေ့ာရမှာပါ။
☞ ဟယျလို၊ မင်ျဂလာပါ။
☞ မနျနဂြော Chen ၊ မင်ျဂလာပါ။
☞ ခငျဗြား ဖုနျးမှားနတေယျ၊ ကြှနျတျောက မနျနဂြော Chen မဟုတျပါဘူး။
☞ ခငျဗြားက ဂရိတျဝေါကုမ်ပဏီက မနျနဂြော Chen မဟုတျဘူးလား။
☞ ဟာ၊ ဒါဆို အားနာလိုကျတာဗြာ၊ ဖုနျးမှားသှားလို့ပါ။
6:29 PM C-Dialogue , Chinese
သူငယ်ချင်းရဲ့ မွေးနေ့ပွဲအတွက် ကိတ်မုန့်ဆိုင်သွားပြီး မွေးနေ့ကိတ်တစ်လုံး အော်ဒါမှာတဲ့အခါမှာ အသေးစိတ် ပြောဆိုကြပုံလေးတွေကို လေ့လာရမှာပါ။
☞ Nín hǎo, wǒ yào dìng yí ge shēngrì dàngāo.
☞ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော် မွေးနေ့ကိတ်တစ်ခု အော်ဒါမှာချင်လို့ပါ။
☞ Hǎo de. Zhè shì wǒmen diàn lǐ de shēngrì dàngāo, qǐng wèn nín yào nǎ yì zhǒng?
☞ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က မွေးနေ့ကိတ်တွေပါ၊ ခင်ဗျား ဘယ်ဟာမျိုးယူမလဲ။
A: 嗯 …… 那我要一个草莓酸奶蛋糕。
☞ Èn …… nà wǒ yào yí ge cǎoméi suānnǎi dàngāo.
☞ အင်း…… ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်က စတော်ဘယ်ရီ ဒိန်ချဉ်ကိတ်တစ်ခု ယူမယ်ဗျာ။
☞ Hǎo de. Qǐng wèn nín yào duō dà de?
☞ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ခင်ဗျား ဘယ်လောက်ဆိုဒ် ယူမလဲ။
☞ Wǒmen dàgài sì ge rén, duō dà de héshì ne?
☞ ကျွန်တော်တို့က လေးယောက်လောက်ရှိတယ်၊ ဘယ်ဆိုဒ်လောက် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ။
☞ Yí bàng gòu le.
☞ တစ်ပေါင်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။
☞ Nà jiù yào yí bàng de ba.
☞ ဒါဆို တစ်ပေါင်ဟာပဲ ယူလိုက်မယ်ဗျာ။
☞ Qǐng wèn nín yào zài dàngāo shang xiě zì ma?
☞ ဒါနဲ့ ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ စာလုံးရေးအုံးမလား။
☞ Yào. Qǐng xiě shàng: Lìlì shēngrì kuàilè.
☞ ရေးမယ်ဗျ။ အပေါ်မှာ " လိလိ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ " လို့ ရေးပေးပါနော်။
☞ Hǎo de. Qǐng wèn nín shénme shíhou lái qǔ dàngāo?
☞ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါနဲ့ ကိတ်မုန့်ကို ဘယ်တော့လောက် လာယူမှာလဲဗျ။
☞ Míngtiān wǎnshang qī diǎn. Qǐng wèn kěyǐ sòng huò shàng mén ma?
☞ မနက်ဖြန် ည ၇ နာရီပါ။ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးတာမျိုးရော ရှိလားဗျ။
☞ Měitiān jiǔ diǎn dào shíbā diǎn wǒmen kǐyǐ sòng huò shàng mén.
☞ နေ့စဉ် ၉ နာရီကနေ ၁၈ နာရီ ( ညနေ ၆ နာရီ ) အတွင်းမှာတော့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးပါတယ်။
☞ A, nà jiù máfan nín míngtiān shíbā diǎn sòng dào wǒmen jiā ba.
☞ အင်း၊ ဒါဆိုရင် မနက်ဖြန် ၆ နာရီမှာ အိမ်ကို လာပို့ပေးပါနော်။
☞ Hǎo de. Máfan nín zài zhèlǐ xiě yíxià nín de dìzhǐ.
☞ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ တဆိတ်လောက် ဒီမှာ ခင်ဗျားနာမည်လေး ရေးပေးပါခင်ဗျ။
☞ Wǒmen měi ge dàngāo huì miǎnfèi pèi yǒu làzhú yì bāo, dāo yì bǎ, dàngāo chā shí bǎ, xiǎopán shí ge. Qǐng wèn nín hái xūyào diǎn biéde ma?
☞ ကိတ်မုန့်တစ်ခုမှာ ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုပ်၊ ဓား တစ်ချောင်း၊ ခက်ရင်း ဆယ်ချောင်း၊ ပန်းကန်ပြားလေး ဆယ်ချပ် အပိုထပ်ဆောင်း ထည့်ပေးပါတယ်။ ခင်ဗျား တခြား ဘာများလိုအပ်သေးလဲခင်ဗျ။
☞ Bú yòng le.
☞ Hǎo de. Bāng nín yùdìng hǎo le. Míngtiān shíbā diǎn jiāng huì bǎ dàngāo sòng dào nín de jiā lǐ. Xièxie nín de guānglín.
☞ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ အော်ဒါကို မှတ်ထားပြီးပါပြီ။ မနက်ဖြန် ညနေ ၆ နာရီ ကိတ်မုန့်ကို ခင်ဗျားအိမ်ကို လာပို့ပေးပါ့မယ်။ အခုလို လာရောက်အားပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
သူငယျခငျြးရဲ့ မှေးနပှေဲ့အတှကျ ကိတျမုနျ့ဆိုငျသှားပွီး မှေးနကေိ့တျတဈလုံး အျောဒါမှာတဲ့အခါမှာ အသေးစိတျ ပွောဆိုကွပုံလေးတှကေို လလေ့ာရမှာပါ။
☞ မင်ျဂလာပါ၊ ကြှနျတျော မှေးနကေိ့တျတဈခု အျောဒါမှာခငျြလို့ပါ။
☞ ဟုတျကဲ့ပါ။ ဒါက ကြှနျတျောတို့ဆိုငျက မှေးနကေိ့တျတှပေါ၊ ခငျဗြား ဘယျဟာမြိုးယူမလဲ။
☞ အငျး…… ဒါဆိုရငျ ကြှနျတျောက စတျောဘယျရီ ဒိနျခဉျြကိတျတဈခု ယူမယျဗြာ။
☞ ဟုတျကဲ့ပါ။ ခငျဗြား ဘယျလောကျဆိုဒျ ယူမလဲ။
☞ ကြှနျတျောတို့က လေးယောကျလောကျရှိတယျ၊ ဘယျဆိုဒျလောကျ အဆငျပွနေိုငျမလဲ။
☞ တဈပေါငျဆို လုံလောကျပါတယျ။
☞ ဒါဆို တဈပေါငျဟာပဲ ယူလိုကျမယျဗြာ။
☞ ဒါနဲ့ ကိတျမုနျ့ပျေါမှာ စာလုံးရေးအုံးမလား။
☞ ရေးမယျဗြ။ အပျေါမှာ " လိလိ မှေးနမှေ့ာ ပြျောရှငျပါစေ " လို့ ရေးပေးပါနျော။
☞ ဟုတျကဲ့ပါ။ ဒါနဲ့ ကိတျမုနျ့ကို ဘယျတော့လောကျ လာယူမှာလဲဗြ။
☞ မနကျဖွနျ ည ၇ နာရီပါ။ အိမျတိုငျရာရောကျ ပို့ပေးတာမြိုးရော ရှိလားဗြ။
☞ နစေ့ဉျ ၉ နာရီကနေ ၁၈ နာရီ ( ညနေ ၆ နာရီ ) အတှငျးမှာတော့ အိမျတိုငျရာရောကျ ပို့ပေးပါတယျ။
☞ အငျး၊ ဒါဆိုရငျ မနကျဖွနျ ၆ နာရီမှာ အိမျကို လာပို့ပေးပါနျော။
☞ ဟုတျကဲ့ပါ။ တဆိတျလောကျ ဒီမှာ ခငျဗြားနာမညျလေး ရေးပေးပါခငျဗြ။
☞ ကိတျမုနျ့တဈခုမှာ ဖယောငျးတိုငျ တဈထုပျ၊ ဓား တဈခြောငျး၊ ခကျရငျး ဆယျခြောငျး၊ ပနျးကနျပွားလေး ဆယျခပျြ အပိုထပျဆောငျး ထညျ့ပေးပါတယျ။ ခငျဗြား တခွား ဘာမြားလိုအပျသေးလဲခငျဗြ။
☞ ဟုတျကဲ့ပါ။ ခငျဗြားရဲ့ အျောဒါကို မှတျထားပွီးပါပွီ။ မနကျဖွနျ ညနေ ၆ နာရီ ကိတျမုနျ့ကို ခငျဗြားအိမျကို လာပို့ပေးပါ့မယျ။ အခုလို လာရောကျအားပေးတာကို ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြ။
ပြန်တယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
8:34 PM C-Sentence , Chinese
ပြန်တာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဝါကျတိုလေးတွေကို လေ့လာနိုင်စေဖို့အတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Tā huí lái le.
☞ ထား ဟွေး လိုင် လဲာ့
☞ သူ ပြန်လာပြီ။
☞ Nǐ shénme shíhou xiǎng huí qù?
☞ နီ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ရှန်(င်) ဟွေ ချွိ
☞ နင် ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်သွားချင်တာလဲ။
☞ Tā huí dào jiā le.
☞ ထား ဟွေ တောက် ကျား လဲာ့
☞ သူ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ။
☞ Wǒ bú huì huí jiā le.
☞ ဝေါ် ပူ ဟွေ့ ဟွေ ကျား လဲာ့
☞ ငါ အိမ်ကို မပြန်တတ်တော့ဘူး။
☞ Bàba xiànzài hái méi huí dào jiā ma?
☞ ပါ့ပါ ရှန့်ဇိုက်z ဟိုင်မေး ဟွေ တောက် ကျား မား
☞ အဖေ အခု အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးလား။
☞ Wǒmen yě huí qù ba.
☞ ဝေါ်မဲင်း ယယ် ဟွေ ချွိ ပါ့
☞ ငါတို့လည်း ပြန်ကြစို့။
☞Tā yě bù huí jiā le ma?
☞ ထား ယယ် ပု ဟွေ ကျား လဲာ့ မား
☞ သူလည်း အိမ်မပြန်တော့ဘူးလား။
☞ Wǒ yīnggāi huí qù le ma ?
☞ ဝေါ် ယင်း(င်)ကိုင်း ဟွေ ချွိ လဲာ့ မား
☞ ငါ ပြန်သင့်ပြီလား။
☞ Nǐ wèi shénme xiǎng huí jiā?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ရှန်(င်) ဟွေ ကျား
☞ နင် ဘာလို့ အိမ်ပြန်ချင်တာလဲ။
☞ Shéi huí qù?
☞ ရှေးh ဟွေ ချွိ
☞ ဘယ်သူ ပြန်သွားတာလဲ။
ပွနျတယျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ပွနျတာနဲ့ ပါတျသကျပွီး ပွောလရှေိ့တဲ့ ဝါကတြိုလေးတှကေို လလေ့ာနိုငျစဖေို့အတှကျ စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ထား ဟှေး လိုငျ လဲာ့
☞ သူ ပွနျလာပွီ။
☞ နီ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ရှနျ(ငျ) ဟှေ ခြှိ
☞ နငျ ဘယျအခြိနျမှာ ပွနျသှားခငျြတာလဲ။
☞ ထား ဟှေ တောကျ ကြား လဲာ့
☞ သူ အိမျပွနျရောကျပွီ။
☞ ဝျေါ ပူ ဟှေ့ ဟှေ ကြား လဲာ့
☞ ငါ အိမျကို မပွနျတတျတော့ဘူး။
☞ ပါ့ပါ ရှနျ့ဇိုကျz ဟိုငျမေး ဟှေ တောကျ ကြား မား
☞ အဖေ အခု အိမျပွနျမရောကျသေးဘူးလား။
☞ ဝျေါမဲငျး ယယျ ဟှေ ခြှိ ပါ့
☞ ငါတို့လညျး ပွနျကွစို့။
☞ ထား ယယျ ပု ဟှေ ကြား လဲာ့ မား
☞ သူလညျး အိမျမပွနျတော့ဘူးလား။
☞ ဝျေါ ယငျး(ငျ)ကိုငျး ဟှေ ခြှိ လဲာ့ မား
☞ ငါ ပွနျသငျ့ပွီလား။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ရှနျ(ငျ) ဟှေ ကြား
☞ နငျ ဘာလို့ အိမျပွနျခငျြတာလဲ။
☞ ရှေးh ဟှေ ခြှိ
☞ ဘယျသူ ပွနျသှားတာလဲ။
Posted by 江美玉 Jiang Meiyu
ပြန်သည် - ပြန်ခြင်း - ပြန် - ပွနျသညျ - ပွနျခွငျး - ပွနျ - go back - hui2 - hui - huí - 回
မင်း ဘာအရောင် ကြိုက်သလဲ။
6:02 PM C-Dialogue , Chinese
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်း မတူကြပါဘူး။ မိမိ ကြိုက်တဲ့ အရောင်လေးတွေကို ပြောကြည့်ကြရအောင်။
☞ Nǐ xǐhuan shénme yánsè?
☞ မင်း ဘာရောင်ကြိုက်လဲ။
☞ Wǒ xǐhuan lǜsè, nǐ ne?
☞ ငါ အစိမ်းရောင် ကြိုက်တယ်၊ မင်းရော။
☞ Wǒ xǐhuan hóngsè hé lánsè.
☞ ငါက အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင် ကြိုက်တယ်။
☞ Nà nǐ bù xǐhuan shénme yánsè?
☞ ဒါဆို မင်းက ဘာရောင်တွေ မကြိုက်တာလဲ။
☞ Wǒ bù xǐhuan huángsè hé zǐsè, nǐ ne?
☞ ငါက အဝါရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင် မကြိုက်ဘူး၊ မင်းရော။
☞ Wǒ yě bù xǐhuan huángsè.
☞ ငါလည်း အဝါရောင် မကြိုက်ဘူး။
မငျး ဘာအရောငျ ကွိုကျသလဲ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အကွိုကျခငျြး မတူကွပါဘူး။ မိမိ ကွိုကျတဲ့ အရောငျလေးတှကေို ပွောကွညျ့ကွရအောငျ။
☞ မငျး ဘာရောငျကွိုကျလဲ။
☞ ငါ အစိမျးရောငျ ကွိုကျတယျ၊ မငျးရော။
☞ ငါက အနီရောငျနဲ့ အပွာရောငျ ကွိုကျတယျ။
☞ ဒါဆို မငျးက ဘာရောငျတှေ မကွိုကျတာလဲ။
☞ ငါက အဝါရောငျနဲ့ ခရမျးရောငျ မကွိုကျဘူး၊ မငျးရော။
☞ ငါလညျး အဝါရောငျ မကွိုကျဘူး။
ဒီညနေ မင်းမှာ အချိန်ရှိလား။
5:48 PM C-Dialogue , Chinese
ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မလို့ သူငယ်ချင်းကို အဖော်သွားစပ်တဲ့အခါ အပြန်အလှန် ပြောဆိုကြတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Lì lì, nǐ jīnwǎn yǒu shíjiān ma? Wǒ qǐng nǐ qù kàn diànyǐng ba.
☞ လိလိ၊ နင် ဒီညနေ အချိန်ရှိလား။ ငါ နင့်ကို ရုပ်ရှင်လိုက်ပြမယ်။
☞ Bàoqiàn, jīnwǎn wǒ yǒu hěn duō zuòyè yào zuò.
☞ ဆောရီးပါ၊ ဒီညနေ ငါ့မှာ အိမ်စာတွေအများကြီး လုပ်စရာရှိတယ်။
☞ Nà míngwǎn ne?
☞ ဒါဆို မနက်ဖြန်ညနေရော။
☞ Bù hǎo yìsi, míngwǎn wǒ yào hé yí ge péngyǒu yìqǐ chī fàn.
☞ အားနာလိုက်တာ၊ ငါက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ ထမင်းသွားစားမလို့။
☞ Nà nǐ shénme shíhou yǒu shíjiān?
☞ ဒါဆို မင်းမှာ ဘယ်တော့ အချိန်ရှိလဲ။
☞ Xià ge zhōumò ba.
☞ နောက်တစ်ပါတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေပေါ့။
☞ Shì xià ge xīngqī diànyǐngyuàn méiyǒu zhè ge diànyǐng le.
☞ လာမယ့်တစ်ပတ်ဆို ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ဒီကားက မတင်တော့ဘူးလေ။
ဒီညနေ မငျးမှာ အခြိနျရှိလား။
ရုပျရှငျသှားကွညျ့မလို့ သူငယျခငျြးကို အဖျောသှားစပျတဲ့အခါ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုကွတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ လိလိ၊ နငျ ဒီညနေ အခြိနျရှိလား။ ငါ နငျ့ကို ရုပျရှငျလိုကျပွမယျ။
☞ ဆောရီးပါ၊ ဒီညနေ ငါ့မှာ အိမျစာတှအေမြားကွီး လုပျစရာရှိတယျ။
☞ ဒါဆို မနကျဖွနျညနရေော။
☞ အားနာလိုကျတာ၊ ငါက သူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့ အတူတူ ထမငျးသှားစားမလို့။
☞ ဒါဆို မငျးမှာ ဘယျတော့ အခြိနျရှိလဲ။
☞ နောကျတဈပါတျ စနေ၊ တနင်ျဂနှပေေါ့။
☞ လာမယျ့တဈပတျဆို ရုပျရှငျရုံမှာ ဒီကားက မတငျတော့ဘူးလေ။
3:49 AM C-Dialogue , Chinese
ပြည်ပခရီးသွားတဲ့အခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဗီဇာဝင်ရတာ အရမ်း အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရီးသွားအေဂျင်စီမှာ ဗီဇာသွားလျှောက်တဲ့အခါ ပြောဆိုတဲ့ ပုံစံလေးကို လေ့လာထားပါ။
( 在旅行社 )
( zài lǚxíngshè )
( ခရီးသွား အေဂျင်စီတွင် )
☞ Nín hǎo!
☞ Nín hǎo! Wǒ xiǎng qù Tàiguó lǚyóu, qǐng wèn nǐmen kěyǐ dàibàn qiānzhèng ma?
☞ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးသွားချင်လို့ပါ၊ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ ဗီဇာဝန်ဆောင်မှု လုပ်လို့ရမလား။
☞ Kěyǐ. Qǐng wèn nín xiǎng shénme shíhou chūfā?
☞ ရပါတယ်။ ခင်ဗျားက ဘယ်တော့ ခရီးစထွက်မှာလဲ။
☞ Yī yuè shí rì.
☞ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ပါ။
☞ Hǎo de. Qǐng wèn nín dǎsuàn zài Tàiguó wán jǐ tiān?
☞ ဟုတ်။ ခင်ဗျားက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘယ်နှစ်ရက်လည်ဖို့ စိတ်ကူးထားလဲ။
☞ Shí tiān.
☞ ၁၀ ရက်ပါ။
☞ Nín mǎi hǎo jīpiào le ma?
☞ ခင်ဗျား လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ပြီးပြီလား။
☞ Mǎi hǎo le.
☞ Nín yǒu hùzhào ma?
☞ ခင်ဗျားမှာ ပတ်စ်ပို့ ရှိလား။
☞ Hǎo de. Nà qǐng nín tígōng nín de wǎngfǎn jīpiào, hái yǒu nín de hùzhào, shēnfènzhèng hé yì zhāng liǎng cùn de cǎisè zhàopiàn.
☞ ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့ အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်ရယ်၊ ပါတ်စ်ပို့၊ မှတ်ပုံတင်ရယ်၊ နှစ်လက်မဆိုဒ် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ တစ်ပုံရယ် တချက်လောက်ပြပေးပါ။
☞ Zhèyàng jiù kěyǐ le ma? Bú yòng tiánbiǎo ma?
☞ အဲ့ဒါဆိုရင် ရပြီလား။ ဖောင်ဖြည့်ဖို့ မလိုဘူးလား။
☞ Bú yòng. Wǒmen huì bāng nín tián hǎo, nín dàoshí jiǎnchá yíxià, qiān ge zì jiù kěyǐ le.
☞ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားကိုယ်စား ဖြည့်ပေးပါ့မယ်၊ အားလုံးပြီးသွားရင် စစ်ကြည့်ပြီး၊ လက်မှတ်လေး ထိုးရုံပါပဲခင်ဗျ။
☞ Zhēn fāngbiàn. Nà fèiyòng shì duōshao ne?
☞ အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဆို ဝန်ဆောင်ခက ဘယ်လောက်လဲဗျ။
☞ Pǔtōng qiānzhèng shì èrbǎi wǔshí kuài, rúguǒ nín yào jiājí dehuà, shì èrbǎi bāshí kuài.
☞ ရိုးရိုးဆိုရင်တော့ ၂၅၀ ပါ၊ တကယ်လို့ ခင်ဗျားက အမြန်လုပ်ချင်ရင်တော့ ၂၈၀ ပါ။
☞ Pǔtōng qiānzhèng duōshao tiān néng ná dào qiānzhèng?
☞ ရိုးရိုးက ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင် ဗီဇာကျနိုင်မလဲ။
☞ Pǔtōng qiānzhèng dehuà yìbān sāntiān, jiājí dehu, yìtiān jiù kěyǐ.
☞ ရိုးရိုးကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်ပါပဲ၊ အမြန်ကတော့ တစ်ရက်တည်းနဲ့ ရပါတယ်။
☞ Wǒ hái bú shì tèbié zháojí, jiù bàn pǔtōng qiānzhèng ba.
☞ ကျွန်တော်က အဲ့ဒီလောက်လည်း အလျင်မလိုပါဘူး၊ ရိုးရိုးပဲ လုပ်လိုက်မယ်နော်။
ပွညျပခရီးသှားတဲ့အခါ မိမိကိုယျတိုငျ ဗီဇာဝငျရတာ အရမျး အလုပျရှုပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခရီးသှားအဂေငျြစီမှာ ဗီဇာသှားလြှောကျတဲ့အခါ ပွောဆိုတဲ့ ပုံစံလေးကို လလေ့ာထားပါ။
( ခရီးသှား အဂေငျြစီတှငျ )
☞ မင်ျဂလာပါ။ ကြှနျတျော ထိုငျးနိုငျငံကို ခရီးသှားခငျြလို့ပါ၊ ခငျဗြားတို့ဆီမှာ ဗီဇာဝနျဆောငျမှု လုပျလို့ရမလား။
☞ ရပါတယျ။ ခငျဗြားက ဘယျတော့ ခရီးစထှကျမှာလဲ။
☞ ဇနျနဝါရီလ ၁၀ ရကျနပေ့ါ။
☞ ဟုတျ။ ခငျဗြားက ထိုငျးနိုငျငံမှာ ဘယျနှဈရကျလညျဖို့ စိတျကူးထားလဲ။
☞ ၁၀ ရကျပါ။
☞ ခငျဗြား လယောဉျလကျမှတျ ဝယျပွီးပွီလား။
☞ ခငျဗြားမှာ ပတျဈပို့ ရှိလား။
☞ ဟုတျကဲ့။ ဒါဆိုရငျ ခငျဗြားရဲ့ အသှားအပွနျ လယောဉျလကျမှတျရယျ၊ ပါတျဈပို့၊ မှတျပုံတငျရယျ၊ နှဈလကျမဆိုဒျ ရောငျစုံဓာတျပုံ တဈပုံရယျ တခကျြလောကျပွပေးပါ။
☞ အဲ့ဒါဆိုရငျ ရပွီလား။ ဖောငျဖွညျ့ဖို့ မလိုဘူးလား။
☞ မလိုပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့က ခငျဗြားကိုယျစား ဖွညျ့ပေးပါ့မယျ၊ အားလုံးပွီးသှားရငျ စဈကွညျ့ပွီး၊ လကျမှတျလေး ထိုးရုံပါပဲခငျဗြ။
☞ အရမျး အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါဆို ဝနျဆောငျခက ဘယျလောကျလဲဗြ။
☞ ရိုးရိုးဆိုရငျတော့ ၂၅၀ ပါ၊ တကယျလို့ ခငျဗြားက အမွနျလုပျခငျြရငျတော့ ၂၈၀ ပါ။
☞ ရိုးရိုးက ဘယျနှဈရကျလောကျဆိုရငျ ဗီဇာကနြိုငျမလဲ။
☞ ရိုးရိုးကတော့ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ၃ ရကျပါပဲ၊ အမွနျကတော့ တဈရကျတညျးနဲ့ ရပါတယျ။
☞ ကြှနျတျောက အဲ့ဒီလောကျလညျး အလငျြမလိုပါဘူး၊ ရိုးရိုးပဲ လုပျလိုကျမယျနျော။
ခင်ဗျားရဲ့ ပါဆယ်ထုပ် ရောက်ပါပြီ။
8:25 PM C-Dialogue , Chinese
ကိုယ့်ရဲ့ပါဆယ်ထုပ်ကို ပါဆယ်ပို့သမားက လာပို့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း အပြင်ရောက်နေတာဆိုတော့ အဆင်ပြေပြေ ပြောဆိုတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါနော်။
☞ Nín hǎo! Nín de kuàidì dào le.
☞ မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ အမြန်ချော ပါဆယ်ထုပ် ရောက်ပါပြီ။
☞ Nín xiànzài zài nǎlǐ?
☞ ခင်ဗျားက အခု ဘယ်မှာလဲဗျ။
☞ Wǒ zài nǐmen lóu xià, qǐng nín xià lái qǔ yíxià.
☞ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ အောက်ထပ်မှာပါ၊ ခင်ဗျား ဆင်းလာပြီး လာယူလိုက်လေ။
☞ Wǒ xiànzài zài wàimiàn. Nín bāng wǒ fàng dào zìtíguì lǐ ba!
☞ ကျွန်တော် အခု အပြင်ရောက်နေလို့ပါ။ ပါဆယ်သေတ္တာလေးထဲမှာ ထည့်ထားပေးခဲ့လို့ ရမလားဗျ။
☞ Zìtíguì mǎn le, fàng bú jìn qù.
☞ သေတ္တာက ပြည့်နေတယ်၊ ထည့်လို့ မဆံ့ဘူးဗျ။
☞ Nà qǐng nín bāng wǒ fàng dào ménwèi nàlǐ ba.
☞ ဒါဆိုရင် ဂိတ်စောင့်ဆီမှာ ထားပေးခဲ့လို့ရော ရမလား။
☞ Ménwèi bù shōu.
☞ ဂိတ်စောင့်က မယူဘူးဗျ။
☞ A? Zhèyàng ya! Wǒ xiànzài zài lùshang, wǔ fēnzhōng hòu dào jiā, yàobù nín děng wǒ yíxià.
☞ ဟမ်။ အဲ့လိုကြီးလား။ ကျွန်တော်က အခု လမ်းပေါ်မှာဗျ၊ နောက်ငါးမိနစ်ဆိုရင် အိမ်ကို ရောက်ပါပြီ၊ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျား ခဏလောက် စောင့်ပေးနိုင်မလားဗျ။
☞ Hǎo de. Nà nín kuài diǎn.
☞ ကောင်းပါပြီ။ ဒါဆိုလည်း မြန်မြန်လေးလာနော်။
☞ Hǎode hǎode, mǎshàng dào.
☞ ဟုတ် ဟုတ်၊ ရောက်တော့မှာပါ။
ခငျဗြားရဲ့ ပါဆယျထုပျ ရောကျပါပွီ။
ကိုယျ့ရဲ့ပါဆယျထုပျကို ပါဆယျပို့သမားက လာပို့တဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျကလညျး အပွငျရောကျနတောဆိုတော့ အဆငျပွပွေေ ပွောဆိုတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ထားပါနျော။
☞ မင်ျဂလာပါ။ ခငျဗြားရဲ့ အမွနျခြော ပါဆယျထုပျ ရောကျပါပွီ။
☞ ခငျဗြားက အခု ဘယျမှာလဲဗြ။
☞ ကြှနျတျော ခငျဗြားတို့ အောကျထပျမှာပါ၊ ခငျဗြား ဆငျးလာပွီး လာယူလိုကျလေ။
☞ ကြှနျတျော အခု အပွငျရောကျနလေို့ပါ။ ပါဆယျသတ်ေတာလေးထဲမှာ ထညျ့ထားပေးခဲ့လို့ ရမလားဗြ။
☞ သတ်ေတာက ပွညျ့နတေယျ၊ ထညျ့လို့ မဆံ့ဘူးဗြ။
☞ ဒါဆိုရငျ ဂိတျစောငျ့ဆီမှာ ထားပေးခဲ့လို့ရော ရမလား။
☞ ဂိတျစောငျ့က မယူဘူးဗြ။
☞ ဟမျ။ အဲ့လိုကွီးလား။ ကြှနျတျောက အခု လမျးပျေါမှာဗြ၊ နောကျငါးမိနဈဆိုရငျ အိမျကို ရောကျပါပွီ၊ ဒါမှမဟုတျ ခငျဗြား ခဏလောကျ စောငျ့ပေးနိုငျမလားဗြ။
☞ ကောငျးပါပွီ။ ဒါဆိုလညျး မွနျမွနျလေးလာနျော။
☞ ဟုတျ ဟုတျ၊ ရောကျတော့မှာပါ။
6:33 PM C-Dialogue , Chinese
မိမိသွားချင်တဲ့နေရာကို ဘယ်လိုသွားရင် အဆင်ပြေနိုင်သလဲဆိုတာကို မေးမြန်းတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးပါ။
☞ Nǐ hǎo! Qǐng wèn qù shìzhōngxīn yào duōshao fēnzhōng?
☞ မင်္ဂလာပါ။ မြို့ထဲသွားရင် ဘယ်နှစ်မိနစ်လောက် ကြာမလဲ။
☞ Zǒulù qù yào sìshí fēnzhōng.
☞ လမ်းလျှောက်သွားရင် မိနစ်လေးဆယ် ကြာမယ်။
☞ Hǎo yuǎn a!
☞ Nà nǐ kěyǐ zuò gōnggòng qìchē qù, wǔ lù chē kěyǐ dào.
☞ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ဘတ်စ်ကားစီးသွားလို့ရပါတယ်၊ နံပါတ် ၅ ကားက ရောက်နိုင်ပါတယ်။
☞ Zuò gōnggòng qìchē qù yào duōshao fēnzhōng?
☞ ဘတ်စ်ကားစီးသွားရင် ဘယ်နှစ်မိနစ် ကြာမလဲ။
☞ Shíwǔ fēnzhōng.
☞ ၁၅ မိနစ်ပေါ့။
☞ Hǎode, xièxie nǐ!
မိမိသှားခငျြတဲ့နရောကို ဘယျလိုသှားရငျ အဆငျပွနေိုငျသလဲဆိုတာကို မေးမွနျးတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးပါ။
☞ မင်ျဂလာပါ။ မွို့ထဲသှားရငျ ဘယျနှဈမိနဈလောကျ ကွာမလဲ။
☞ လမျးလြှောကျသှားရငျ မိနဈလေးဆယျ ကွာမယျ။
☞ ဒါဆိုရငျ ခငျဗြား ဘတျဈကားစီးသှားလို့ရပါတယျ၊ နံပါတျ ၅ ကားက ရောကျနိုငျပါတယျ။
☞ ဘတျဈကားစီးသှားရငျ ဘယျနှဈမိနဈ ကွာမလဲ။
☞ ၁၅ မိနဈပေါ့။
10:43 PM C-Dialogue , Chinese
ထမင်းမစားပဲ အသီးတွေချည်းပဲ စားရင် ဝိတ်ကျပါ့မလား။ စကားပြောပုံစံလေးကို လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Yǐjīng shí èr diǎn le, wǒmen qù chī fàn ba. Xiǎozhāng, nǐ yào yìqǐ qù ma?
☞ ၁၂ နာရီတောင် ထိုးပြီ၊ ငါတို့ ထမင်းသွားစားကြရအောင်၊ မင်းလည်း အတူတူ လိုက်မလား။
☞ Wǒ jiù bú qù le, wǒ jīntiān dài wǔfàn le.
☞ ငါ မလိုက်တော့ဘူး၊ ငါ ဒီနေ့ နေ့လည်စာ ယူလာတယ်။
☞ Shì ma? Nǐ dài le shénme?
☞ ဟုတ်လား။ မင်း ဘာတွေ ယူလာတာလဲ။
☞ Wǒ dài le píngguǒ, mángguǒ, niúyóuguǒ, hái yǒu qíyìguǒ.
☞ ငါက ပန်းသီး၊ သရက်သီး၊ ထောပတ်သီးတွေ ယူလာတာပါ၊ ကီဝီသီးလည်း ပါသေးတယ်။
☞ Dōu shì shuǐguǒ, nǐ zěnme bù chī fàn?
☞ အကုန်လုံး အသီးတွေချည်းပဲ၊ မင်း ဘာလို့ ထမင်းမစားတာလဲ။
☞ Xiàge yuè wǒ yào qù wǒ péngyǒu de hūnlǐ, xiànzài děi jiǎnféi.
☞ လာမယ့်လ ငါ့သူငယ်ချင်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို သွားရမယ်၊ အခု ဝိတ်ချမှရမယ်။
☞ Kěshì, shuǐguǒ lǐ yǒu hěn duō táng. Nǐ quèdìng zhème chī zhēnde néng jiǎnféi ma?
☞ ဒါပေမယ့်၊ အသီးတွေက သကြားဓာတ် အရမ်းများတယ်လေ။ ဒီလိုစားလို့ တကယ် ဝိတ်ချနိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာလို့လား။
ထမငျးမစားပဲ အသီးတှခေညျြးပဲ စားရငျ ဝိတျကပြါ့မလား။ စကားပွောပုံစံလေးကို လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ ၁၂ နာရီတောငျ ထိုးပွီ၊ ငါတို့ ထမငျးသှားစားကွရအောငျ၊ မငျးလညျး အတူတူ လိုကျမလား။
☞ ငါ မလိုကျတော့ဘူး၊ ငါ ဒီနေ့ နလေ့ညျစာ ယူလာတယျ။
☞ ဟုတျလား။ မငျး ဘာတှေ ယူလာတာလဲ။
☞ ငါက ပနျးသီး၊ သရကျသီး၊ ထောပတျသီးတှေ ယူလာတာပါ၊ ကီဝီသီးလညျး ပါသေးတယျ။
☞ အကုနျလုံး အသီးတှခေညျြးပဲ၊ မငျး ဘာလို့ ထမငျးမစားတာလဲ။
☞ လာမယျ့လ ငါ့သူငယျခငျြးရဲ့ မင်ျဂလာပှဲကို သှားရမယျ၊ အခု ဝိတျခမြှရမယျ။
☞ ဒါပမေယျ့၊ အသီးတှကေ သကွားဓာတျ အရမျးမြားတယျလေ။ ဒီလိုစားလို့ တကယျ ဝိတျခနြိုငျမယျဆိုတာ သခြောလို့လား။
တနေရာရာကို လျှောက်လည်ဖို့ စဉ်းစားထားရင် စားစရာ သောက်စရာအတွက် ဘာတွေသယ်သွားကြမလဲ။ သင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Xiàzhōurì wǒmen qù hǎibiān wán, wǒ dài diǎn chīde qù.
☞ လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ ငါတို့ ပင်လယ်ကမ်းနား သွားလည်ကြမယ်၊ ငါက စားစရာတချို့ ယူခဲ့မယ်။
☞ Nà wǒ ne?
☞ ဒါဆို ငါကရော။
☞ Nǐ dài shuǐ hé shuǐguǒ, zěnme yàng?
☞ မင်းက ရေနဲ့ အသီးတွေ သယ်ခဲ့ပေါ့၊ ဘယ်လိုလဲ။
☞ Hǒo de.
☞ A, shuǐ tài zhòng le, wǒmen dào nà zài mǎi ba.
☞ ဟမ်၊ ရေက အလေးကြီးပဲ၊ ငါတို့ ဟိုရောက်မှ ဝယ်ကြတာပေါ့။
တနရောရာကို လြှောကျလညျဖို့ စဉျးစားထားရငျ စားစရာ သောကျစရာအတှကျ ဘာတှသေယျသှားကွမလဲ။ သငျခနျးစာလေးကို လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ လာမယျ့တနင်ျဂနှနေေ့ ငါတို့ ပငျလယျကမျးနား သှားလညျကွမယျ၊ ငါက စားစရာတခြို့ ယူခဲ့မယျ။
☞ ဒါဆို ငါကရော။
☞ မငျးက ရနေဲ့ အသီးတှေ သယျခဲ့ပေါ့၊ ဘယျလိုလဲ။
☞ ဟမျ၊ ရကေ အလေးကွီးပဲ၊ ငါတို့ ဟိုရောကျမှ ဝယျကွတာပေါ့။
ကျွန်တော်က လေယာဉ်နဲ့ လာတာပါ။
လေယာဉ်နဲ့ လာတဲ့ဧည့်သည်ကို ခရီးဦးကြိုပြု နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးကို လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Nǐ hǎo, Lǐ zǒng. Huānyíng lái Shànghǎi!
☞ မင်္ဂလာပါ၊ မန်နေဂျာ လီ။ ရှန်ဟိုင်းကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။
☞ Nǐ hǎo, Wáng zǒng. Hěn gāoxìng rènshi nǐ!
☞ မင်္ဂလာပါ၊ မန်နေဂျာ ဝမ်။ ခင်ဗျားနဲ့ တွေ့ရတာ အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်။
☞ Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ! Nǐ shì zuò fēijī lái de ma? Lù shang zěnme yàng?
☞ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားကို တွေ့ရတာ အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ခင်ဗျားက လေယာဉ်နဲ့ လာတာလား။ ခရီးလမ်းတလျှောက် ဘယ်လိုလဲ။
☞ Duì, wǒ shì zuò fēijī lái de, hěn shùnlì.
☞ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်က လေယာဉ်နဲ့ လာတာပါ၊ အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ကြှနျတျောက လယောဉျနဲ့ လာတာပါ။
လယောဉျနဲ့ လာတဲ့ဧညျ့သညျကို ခရီးဦးကွိုပွု နှုတျဆကျတဲ့အခါမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ စကားပွောပုံစံလေးကို လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ မင်ျဂလာပါ၊ မနျနဂြော လီ။ ရှနျဟိုငျးကနေ ကွိုဆိုပါတယျ။
☞ မင်ျဂလာပါ၊ မနျနဂြော ဝမျ။ ခငျဗြားနဲ့ တှရေ့တာ အရမျး ဝမျးသာပါတယျ။
☞ ကြှနျတျောလညျး ခငျဗြားကို တှရေ့တာ အရမျး ဝမျးသာပါတယျ။ ခငျဗြားက လယောဉျနဲ့ လာတာလား။ ခရီးလမျးတလြှောကျ ဘယျလိုလဲ။
☞ ဟုတျကဲ့၊ ကြှနျတျောက လယောဉျနဲ့ လာတာပါ၊ အရမျး အဆငျပွပေါတယျ။